I-Lone Star Mini Cabin e-Palo Duro Canyon Rim - I-Airbnb
I-Lone Star Mini Cabin e-Palo Duro Canyon Rim
Canyon, Texas, i-United States
Indlu encane ibungazwe ngu-Sheree
U-Sheree Ungumbungazi ovelele
Kutholakala ezinyathelweni ezimbalwa ukusuka emnyango ukuya e-Palo Duro Canyon State Park emangalisayo, indlu yethu eyakhiwe ngamapulangwe yesimanje ngeke idumaze! Le ndawo encane yokufihla ilala izivakashi ezingaba ngu-4 futhi inakho konke ukunethezeka kwekhaya nokubukwa kwe-Canyon, ukuphuma kwelanga nemvelo ezungezile.
Indlu yethu eyakhiwe ngamapulangwe encane ihlezi onqenqemeni lwe-Canyon e-Palo Duro Zipline Adventure & RV Park futhi ibheke ngaphandle empumalanga ngokubukwa kwe-State Park ne-Sunrise. Njengoba yaziwa ngokuthi indlu eyakhiwe ngamapulangwe i-Lone Star, le ndawo ingu-200sq ft enombhede weNdlovukazi i-Tuft & Needle, i-Queen Size Serta Donsa i-Futon, indlu yokugezela, ikhishi elincane- elihlanganisa ifriji encane, i-microwave, usinki nomshini wokwenza ikhofi. Igumbi lokugezela linendawo evulekile yokugeza kanye nekhabethe elincane. Ifasitela elikhulu le-bay ligcwalisa yonke indawo ngokukhanya kwemvelo phakathi nosuku futhi linikeza umbono omuhle kakhulu ku-Canyon. Idekhi evulekile inendawo yokosa inyama ye-propane ene-burner ukuze ujabulele ukudla okulula okuphekiwe kwangaphandle okusheshayo uma ukhetha.
Indlu Eyakhiwe Ngamapulangwe Encane i-Lone Star inqotshwe ngokulandelana kwezindlu ezakhiwe ngamapulangwe futhi iyindawo ekahle kakhulu yalezo zinsuku ngemva kokuchitha isikhathi e-Palo Duro Canyon. Indawo enhle yokuphumula ngemva kosuku lokuqwala izintaba noma ukuhamba ngebhayisikili. Indlu yethu eyakhiwe ngamapulangwe encane ilungele abantu abangu-2, i-snug nge-4:).
I-Lone Star Cabin itholakala ngasemnyango e-Palo Duro Zipline Adventure & RV park, qhubeka ngokusebenzisa isango le-RV park futhi itholakala ngakwesokunxele, esingasempumalanga. Isikhathi sokungena ngu-3pm noma kamuva. Ukungena kuwukukhiya okungenazo izikhiye ozonikezwa ikhodi ngaphambi kokufika, ngakho ukungena ebusuku akuyona inkinga. Isikhathi sokuphuma ngu-11am.
Akekho umuntu okufanele aqale usuku lwakhe ngaphandle kwe-caffeine - ngakho-ke uzothola uhlobo lwetiye, ikhofi, nobisi ukuze uthole amandla, kanye nokudla okulula kwasekuseni.
Sikukhuthaza ukuba usebenzise i-deck, lapho sinikeza khona izihlalo ezimbili, i-lounger, i-grill kanye nokuvimba ucingo lwasenyakatho ngalezo zinsuku ze-panhandle. Itafula lepikiniki lensimbi lihlinzekwa ngaphandle ukuze lidle noma lidlale amakhadi e-. Isifutho sesiphazamisi nesikrini selanga siyatholakala ku-closet.
Umbhede uphakeme ukuze uhlalise isikhala semithwalo. Izihlalo zinikezwa ngaphansi kombhede uma kwenzeka uzidinga ukuba zikhuphukele embhedeni:)
I-TV ye-Smart WIFI inikeziwe ukuthi ungafinyelela ku-akhawunti yakho ye-Netflix, i-Prime, i-Hulu (njll).
Kupholile & Ukushisa indawo nge-Windows Unit heating & Air conditioner & ceiling Fan.
Indlu yokugezela ihlotshiswe ngokugcwele ngamathawula ahlanzekile, ezinye izinto zokugeza eziyisisekelo- i-shampoo, i-conditioner & ukugeza umzimba. Uma udinga amathawula engeziwe sigcina izikhala ku-closet, kanye nomshini wokomisa izinwele, ne-ayina.
Ngezinjongo zokuphepha, sicela ukuthi zonke izivakashi zethu zibe nephrofayili ephelele ye-Airbnb ngaphambi kokuba samukele izicelo zokubhukha. Imininingwane eyisisekelo yokuxhumana (inombolo yocingo nekheli le-imeyili) kufanele iqinisekiswe, futhi i-ID yakho ye-Offline (isib. ilayisensi yokushayela) kufanele ixhunywe ku-akhawunti yakho.
Singabantu nje kuphela noma sishaya ucingo & singaba khona emaminithini angaba ngu-10 nanoma yini engase idinge ukunakwa.
Sicela unakwe-ngaphandle kwalokho ukufaka ezinye izindlu ezakhiwe ngamapulangwe ukuze izivakashi zizijabulele ukuze kube nomsindo wokwakha.
Ngo-August 2021, sizofaka omahamba-nendlwana bakudala emgqeni futhi bazobonakala besuka endlini eyakhiwe ngamapulangwe & emphemeni.
I-Zipline & RV Park isendlini efanayo, ngakho ungase ubone futhi uzwe ezinye izivakashi ziza futhi zihamba, zihamba ngezinyawo, zikhempa & ziping usuku lonke.
Indlu eyakhiwe ngamapulangwe i-Lone Star nayo iyindawo ekahle kakhulu yokubuka ukuphuma kwelanga ngaphakathi noma endaweni yangaphandle. Phumula & Jabulela ukuhlala kwakho e-Canyon eduze ne-Palo Duro Canyon State Park.
Indawo yokungena e-Palo Duro State Park cishe ingamamitha angu-500 ukusuka e-RV Park.
4.98 · 242 okushiwo abanye
Recent empty nesters who like to create & love the beautiful backdrop of the Canyon & the excitement of Disney World:) Our hobbies include entertaining & hanging out wi…
USheree Ungumbungazi ovelele